Ihe nkiri 60 kachasị mma na oge niile - Ozi
Ibu Ibu Nddị International Gynaec Olee Otú Iji Ngwọta Homelọ Ntutu Isi Agba Style Ahụike Agba Anya
65 nke fim kacha mma na oge niile
Ma ị masịrị ikweta ma ọ bụ na ọ bụghị, onye ọ bụla hụrụ ezigbo mma ihunanya nkiri . Hollywood nwere mastered the art of tugging at our heartstrings with swoon-kwesịrị storylines, si A Na-amụ Kpakpando ka Akwụkwọ Ndetu . Mana n'ezie, ihe ndị a na-eme ka enweghị aha ịhụnanya ole na ole. Anyị achịkọtala ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị mma, na-emebi ihe, na-akpali agụụ mmekọahụ na mushy flicks site na afọ. N'ebe a, 65 nke ihe nkiri kachasị mma nke oge niile ga-eme ka ịchị ọchị, tie mkpu, ee, kwere n'ezi ịhụnanya.
Njikọ: Ihe Nleta 10 kacha mma nke oge niile
1. 'Naanị Wright' (2010)
Onye na-agwọ ọrịa anụ ahụ, Leslie Wright (Queen Latifah), na-arụ ọrụ nrọ ya na-arụ ọrụ maka ọkpọ ọkpọ basketball, Scott McKnight (Common). Ihe na-ewere ọnọdụ ịhụnanya mgbe ọ malitere ịdakwasị onye ọrịa ọhụụ ya, bụ onye na-amaghị ihe ọ bụla ọ na-eme.
Lelee na Amazon Prime
Ihe nkiri USA
2. ‘N’ime Ọnọdụ forhụnanya’ (2000)
Edere na 1960s Hong Kong, ihe nkiri a mara mma na-akọ akụkọ banyere ndị agbata obi abụọ (nke Tony Leung na Maggie Cheung) bụ ndị di na nwunye na-enwe mmekọrịta. Ka ha na-agba mgba okpuru a mgba, ha abụọ na-amalite iwepụtakwu oge wee mechaa nwee mmetụta maka ibe ha.
Mgbazinye na Amazon Prime
3. ‘A mụrụ kpakpando’ (2018)
Mgbe onye na-egwu egwu a ma ama Jack (Bradley Cooper) na - achọpụta (ma nwee ịhụnanya) onye na - ese ihe egwu Ally (Lady Gaga), ọ na - akpọrọ ya ka ọ hụ ya ma wulie ọrụ ya. Mana dị ka akụkọ ịhụnanya ọ bụla, ọdachi dị nso na nkuku.
Ihe osise zuru ụwa ọnụ
Abụm nwa agbọghọ, guzo n'ihu nwa nwoke, na-arịọ ya ka ọ hụ ya n'anya. Gah, anyị achọghịdị ịma otú cheesy si dị, akụkọ a banyere ọmarịcha onye na-ere ahịa akwụkwọ Bekee (Hugh Grant) na onye omeewu ama ama ama ama ama America (Julia Roberts, nke na-egwuri egwu n'onwe ya) bụ ezigbo rom-com gold.
5. 'Lovehụnanya & Nkata' (2000)
Monica (Sanaa Lathan) na Quincy (Omar Epps) bụ ndị enyi abụọ bụ nwata na-enwe otu asọmpi asọmpi: bụrụ onye egwuregwu bọọlụ basketball. Ihe nkiri a na-agbaso njem njem ha ọtụtụ afọ ka a manyere ha ịhọrọ n'etiti mmekọrịta ha na ọrụ ha na-eto eto.
6. ‘Lovehụnanya n’ezie’ (2003)
Otu ụyọkọ kpakpando (Hugh Grant na Colin Firth gụnyere) gbalịa ịchọpụta ndụ ịhụnanya ha na-achị ọchị na anya mmiri na-atụba na ngwakọta. Na mgbakwunye, enwere mkpuchi Epic nke Mariah Carey niile m chọrọ maka ekeresimesi. (Mana ị nwere ike ile onye a kpamkpam n'afọ niile.)
Njikọ: Ihe kacha sie ike ‘Lovehụnanya n’ezie’ Quiz na Intanet
Foto ndị Columbia
7. ‘O mere n’otu abalị’ (1934)
Ezigbo olulu a ma ọ bụ ebe a na-eme ihe ike (Claudette Colbert) onye gbapụrụ na ezinụlọ ya ma zute nwoke mara mma (Clark Gable) nke dị njikere inyere ya aka. Agwọ ahụ? Onye ọbịbịa ahụ nwere obiọma bụ n'ezie onye nta akụkọ na-achọ akụkọ. Nke a bụ ihe nkiri izizi iji merie isi akara ugo mmụta ise kachasị mma (Foto dị mma, Director, onye na-eme ihe nkiri, onye na-eme ihe nkiri na Screenplay).
8. ‘Ọnwa’ (2016)
Ọ na - agbaso nwa okorobịa ojii na isi atọ dị iche iche nke ndụ ya. Ka ọ na-aga, ọ na-ajụ ajụjụ gbasara mmekọahụ ya, na-ezute ndị enyi ọhụụ ma mụta ihe ịhụnanya pụtara n'ezie. Oh, na anyị kwuru banyere ya meriri Oscar Award maka Foto kacha mma? (Ndo, La La Land .)
Lelee na Netflix
Mgbe nwatakịrị nwanyị na -adịghị mma n'anya, Amélie (Audrey Tautou), kwagara n'akụkụ etiti Paris iji bụrụ onye na-akwa iko, ọ na-achọpụta akụ furu efu nke onye bụbu onye bi n'ụlọ ya ma kpebie ịrara ndụ ya nye iji nyere ndị gbara ya gburugburu aka. . Ọ na-ezute ọtụtụ ndị mara mma n'okporo ụzọ tinyere ihe nwere ike ịbụ egwuregwu ya zuru oke. Maa mma, fun na ozugbo kpochapụwo.
Ihe osise kacha mkpa
Akụkọ na-agbawa obi na-eso Molly Jensen (Demi Moore), onye na-ese ihe na-anagide ọnwụ nke di ya ọ hụrụ n'anya, Sam Wheat (Patrick Swayze), onye laghachiri n'ụwa dị ka mmụọ na-enweghị ike. Just dịbeghị ndụ rue mgbe ị hụrụ ebe ahụ na Moore, Swayze na ụfọdụ ụrọ na-adịghị mma.
Mafere Bolen / NETFLIX
11. 'The Lovebirds' (2020) Ndị na-ahụ n'anya
Obere oge tupu ya agbasaa, Leilani (Issa Rae) na Jibran (Kumail Nanjiani) tinyere aka na atụmatụ igbu ọchụ. Jọ ịlụ di ma ọ bụ nwunye ha ga-eme iji kpochapụ aha ha. Hà pụrụ ichebe mmekọrịta ha n'oge ọnọdụ ndị a na-ejighị n'aka?
12. ‘Onye Ọfịs na Onye Gentleman’ (1982)
Mgbe Nwanyị mara mma bụ ezigbo rom-com kpochapụwo, ihe nkiri Richard Gere a banyere nwa okorobịa na-emecha ọzụzụ ụgbọ mmiri ya bụ ihe tozuru etozu banyere ịhụnanya na uto mmadụ. Debe anụ ahụ na njikere-ị ga-ekele anyị ma emechaa.
Ndị ọzọ gbalịrị, mana ọ dịghị di na nwunye nkiri dị ka Ilsa na Rick (Ingrid Bergman na Humphrey Bogart) nọ na mmekọrịta ịhụnanya a n'oge agha banyere ọkụ ọkụ abụọ na-agafe n'okporo ụzọ mgbe ọtụtụ afọ na-enweghị njikọ. (Ihe nkiri ojii na ọcha na FTW.)
Njikọ: Di na Nwunye Di na Nwunye kachasị nke oge
Tie mkpu! Slọ nka
14. 'Basmati Bad' (2017)
E zigara nwa akwụkwọ sayensị, Linda (Brie Larson) na India maka ire ọresi mkpụrụ ndụ ihe nketa. Mgbe ọ matara na ọ ga-ebibi ọrụ, ya na otu onye ọrụ ugbo bi n’obodo ahụ aha ya bụ Rajit (Utkarsh Ambudkar) ga-eme ka ihe dị mma.
Lelee na Vudu
15. 'Akụkọ Lovehụnanya' (1970)
Anyị ejighị n'aka na anyị nwere ike ịbanye na akara ikpeazụ a ama ama, Lovehụnanya pụtara na ịghara ịsị ị nwute (ọ naghị), mana nke a '70s cult classic is zuru oke maka abalị ndị ahụ mgbe ịchọrọ naanị ezigbo mma jọrọ njọ.
Njikọ: 10 TV na-egosi na Ikiri mgbe Need chọrọ ezigbo mkpu ákwá
Lekwasị Anya Atụmatụ
16. 'Ihe Ọhụrụ' (2006)
Kenya (Sanaa Lathan) dị n'etiti ụmụ nwoke abụọ dị iche. (Familiarda maara?) Ihe niile na-amalite mgbe ọ na-agbadata ụbọchị ọhụụ mgbe ọ matara na onye chọrọ ya abụghị Black. Ọ ga - ekwe ka ihe ọjọọ ndị ọ na - eme n’oge gara aga gbochie ya ịchọ onye ọ ga-ebi?
17. 'Nri ụtụtụ na Tiffany's' (1961)
Pearl ndị ahụ, the Givenchy LBD and that iconic 'do-this classic is worth watching for Holly Golightly’s (Audrey Hepburn) naanị enviable style naanị. Ma akụkọ a dabere na akwụkwọ akụkọ a ma ama nke Truman Capote nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-aga maka ya-ihe ọchị, ịhụnanya na ebe ndị na-adịghị mma Upper East Side.
Welọ ọrụ Weinstein
A na-eme ụfọdụ romanaị ka gị na S.O gị nwee ike ijikọ. na ime ka o doo anya na unu hụrụ ibe unu n’anya. Ndị ọzọ, dị ka nke a, ka a na-ele naanị ha anya (ma ọ bụ soro gị). Ihe ngosi di ilu banyere alụmdi na nwunye na obi mgbawa nke Ryan Gosling na Michelle Williams gosipụtara.
19. ‘Onye Ukwu’ (2019)
O nwere ike ọ gaghị enwe obi ụtọ nke njedebe, mana ihe nkiri a na-akọ banyere otu nwa agbọghọ (Gina Rodriguez) nke enyi ya nwoke tụbara. Yabụ, ya na ndị enyi ya nwanyị kachasị nso ga-abanye na hoorah ikpeazụ tupu ọ kwaga San Francisco maka mmalite ọhụụ.
Foto ndị dị na Buena Vista
20. 'Mma na anụ ọhịa' (1991)
Ihe nkiri a na-adọrọ adọrọ na-adọrọ adọrọ bụ ihe ngosi maka afọ niile. Ozo nke oma? Ntughari 2017 nke Emma Watson nke Belle na Dan Stevens dika Anumanu. Versiondị ihe eji eme ihe na-eme ka akụkọ ifo na-enye ọgbara ọhụụ, nke nwanyị na-atụghị anya ya ka ọ bịara.
Lelee na Disney +
21. 'Onye Ọrịa Ahụ' (2017)
Nke a abụghị ọkọlọtọ rom-com gị. Kama, ihe nkiri a na-atọ ọchị ma dịkwa nkọ (dabere na Kumail Nanjiani na Emily Gordon’s IRL love story) na-enyocha isiokwu ọdịnala ọdịnala ma nwee obi ụtọ na-enye obi ụtọ. Onye amụrụ na Pakistan bụ Nanjiani (nke aka ya) dara maka Emily Gardner (Zoe Kazan) nwa akwụkwọ grad, mana mgbe ọ na-arịa ọrịa dị omimi nke na-ahapụ ya na coma, Kumail ga-agakwuru ndị mụrụ ya, ezinụlọ nke ya na ezi mmetụta ya.
22. 'Lekwasịrị Anya' (2015)
Mgbe onye na-eme ihe nkiri (Will Smith) na-ewere novice (Margot Robbie) n'okpuru nku ya, ọ dịghị anya tupu ọbụbụenyi ha aghọọ nke ịhụnanya. Nke ahụ bụ, ruo mgbe ya na ya na-agbasasị na-aghọ ihe emezu femme fatale. * Na-agbakwụnye na nkwanye kwụ n'ahịrị *
Lelee na YouTube
Ndị omenkà jikọtara ọnụ
23. 'West Side Akụkọ' (1961)
N’akụkụ ọdịda anyanwụ nke elu, òtù ndị omempụ abụọ — Sharks na Jets — na-alụ ọgụ maka ịchịkwa ógbè ahụ. Ihe gbagwojuru anya mgbe onye otu Jets Tony (Richard Beymer) dara na Maria (Natalie Wood), nwanne nwanyi onye ndu ndi Sharks. Ọ bụ oge a Romeo na Juliet nwere egwu dị egwu.
24. ‘Ezumike Ndị Rome’ (1953)
Na-ewebata Audrey Hepburn Ihe nkiri mbụ banyere adaeze na-agbanahụ ndị na-eche ya nche ma hụ onye ọdee akwụkwọ akụkọ America (Gregory Peck) na Rome. Ọ bụ ihe magburu onwe ya na-adọrọ adọrọ, na-adọrọ mmasị ma na-echekwa maka kpochapụwo ihe nkiri Fans.
25. 'Foto ahụ' (2020)
Mgbe nne Mae (Issa Rae) nwụrụ na mberede, ọ hapụrụ ọtụtụ ajụjụ. Mgbe ọ chọtara foto ochie nke nne ya nwụrụ anwụ, ọ na-abanye na akụkọ ihe mere eme nke ezinụlọ ya na nke mbụ, nke na-ebute ịhụnanya na-atụghị anya ya. Had nwere anyị na Issa Rae.
Foto Fox Searchlight / Ihe nkiri Miramax
26. ‘Ogige Ubi’ (2004)
Zach Braff duziri ma kpakpando na ihe nkiri a na-atọ ụtọ ma na-enwe mmetụta banyere nwa okorobịa nwere nsogbu (Andrew) nke laghachiri obodo ya na New Jersey maka olili nne ya mgbe ya na ezinụlọ ya kewapụrụ. Natalie Portman ngalaba-kpakpando dị ka quirky ịhụnanya mmasị na ọtụtụ ndị ọzọ offbeat odide na-egbu egbu soundtrack.
27. 'Akwụkwọ ndetu' (2004)
Oh, bia. Anyị kwesịrị ịgụnye akụkọ a na-akọ akụkọ banyere di na nwunye na-akụda nsogbu iji chọta ụzọ ha ga-esi laghachi ibe ha. Ebe ahụ ka Noa (Ryan Gosling) na-eti mkpu Gịnị ka ị chọrọ? na Allie (Rachel McAdams) ga-ada ụda olu ruo mgbe ebighi ebi.
28. 'About Oge' (2013)
Site na nwoke n'azu Acthụnanya N'ezie, Notting Hill na Akwụkwọ ọgụgụ Bridget Jones abịa na nke a na-ewuli elu banyere nwa okorobịa nke ghọtara na ya nwere ikike njem oge. Ihe ncheta magburu onwe ya iji kpọrọ ihe kwa ụbọchị (yana Rachel McAdams dị ịtụnanya n'ihe niile).
StudioCanal / Welọ ọrụ Weinstein
Melodrama a banyere umu nwanyi abuo ndi huru onwe ha n’anya n’ime ‘50s bu ihe ejikere nke oma ma juputa n’okpuru akwukwo na ikuku. Akụkọ ahụ malitere mgbe Therese Belivet (Rooney Mara) tụrụ Carol (Cate Blanchett) na ngalaba ụlọ ahịa, ndị ọzọ bụ akụkọ ihe mere eme.
30. ‘Mkpuchi Mmehie’ (2007)
Won’t gaghị enwe ike ịdọpụ anya gị na ihuenyo n'oge na idaha ke n'ọbá akwụkwọ na James McAvoy na Keira Knightley (na ya pụtara green uwe). N'oge na-adịghị anya, ihe na-ewere ọnọdụ dị njọ ka ezinụlọ abụọ a kewara abụọ ndị a.
31. 'Ebighi Ebi Anyanwu nke Spotless Mind' (2004)
Mgbe nsogbu gbasasịrị, di na nwunye gbara alụkwaghịm (Jim Carrey na Kate Winslet) na-ehichapụ ncheta niile nke mmekọrịta ha na nke a na-agbawa obi, ihe nkiri na-atọ ọchị-ihe nkiri nke kụrụ ihe nkiri na 2004. Ha nwere ike ịnagide ọnwụ nke onye ha na-emeghị mara adị?
Anyị anaghị eme ihere ikweta na anyị hụrụ nke a na ụlọ ihe nkiriabụọugboro atọ. Ma n’agbanyeghi na anyi matara ka osi agwu (ihe apuru apu: ugbo mmiri ahu mikpuru), obi anyi ka digabana-amali elu n'ọ joyụ oge ọ bụla Jack na Rose gbara egwu na eserese ịgba ọtọ.
Ihe osise eserese nke Sony
33. 'Kpọọ m n'aha gị' (2017)
Omuma a na-eto eto n'etiti nwatakịrị nwoke dị afọ iri na asaa na onye inyeaka nyocha nna ya na-ewere ọnọdụ na 1980s Italy nke zuru oke. Otu akụkọ banyere ịhụnanya mbụ dabere na akwụkwọ akụkọ André Aciman na-akwado nke ọma na nke a na-akpọ Timothée Chalamet na Armie Hammer. Anyị kwesịrị ikwu ọzọ?
34. ‘Crazy Rich Asia’ (2018)
Dabere na akwụkwọ akụkọ kachasị mma nke Kevin Kwan na 2013 nke otu aha ahụ, ihe nkiri a na-atọ ọchị bụ ihe nkiri Hollywood mbụ kachasị na ọtụtụ ndị Asia na ndị ọrụ kemgbe The Ọyụ Luck Club na 1993 (NBD). Ọ na-esote nwa afọ New Yorker Rachel Chu (Constance Wu) ka ọ na-eso enyi ya nwoke, Nick Young (Henry Golding) gaa agbamakwụkwọ ezigbo enyi ya na Singapore. Mgbe ọ bịarutere, ọ na-amụta na ọ bụghị naanị na Nick bara ọgaranya kamakwa ọ bụkwa otu n'ime ụmụ akwụkwọ bachelọ ruru eru nke mba ahụ. Kedụ ka Rachel ga-esi gagharị ụwa ọhụrụ a nke akụnụba na nkwado ya na nne ya na-ekwenyeghị?
IFC Ihe nkiri
35. ‘Bulu bu Agba di n’ile’ (2013)
Mgbe Adèle dị afọ 15 (Adèle Exarchopoulos) zutere Emma (Léa Seydoux) na-acha anụnụ anụnụ, ọ na-agbanye ihe n'ime ya. Ndị na-ege ntị nke afọ niile ga-atụgharị uche site na akụkọ ịhụnanya a dị mgbagwoju anya na nke ịhụnanya French nke na-agbanwe n'ime afọ iri. (Nkwuputa: Ọ dị awa atọ ogologo, yabụ kpachara anya wepụta oge zuru oke na oge gị.)
Site n'ikike nke Netflix
36. 'Nye themụaka Nile M Hụrụ n'Anya Tupu' (2018)
Lara Jean (Lana Condor) na-anọrọ onwe ya-nke ukwuu nke na o nwere akwụkwọ ozi ịhụnanya na kọlọtọ ya, ebe ọ kwupụtara mmetụta ya nye nke ọ bụla n'ime nnabata ya. Mgbe nwanne ya nwanyị nke ọ tọrọ (Anna Cathcart) zitere akwụkwọ ozi na mberede, mkpu na-apụta.
Ihe nkiri Miramax
Anyị hụrụ nkọcha, boozing na ịchị ọchị-na-ada ọnụ na-akpa ọchị Bridget Jones (Renée Zellweger) dị nnọọ ka ọ bụ na nke a irresistible ntochi na spawn abụọ sequels. Ọ bụrụ na enwere otu ihe nke ka ga-arụ ụka: you bụ otu Darcy ka ọ bụ otu Cleaver? (Ajụjụ aghụghọ: Darcy, doro anya.)
Lelee na Hulu
38. 'Ọ bụrụ na Beale Street nwere ike ikwu okwu' (2018)
Tish na Alonzo (Fonny) abụrụla enyi kemgbe ha bụ ụmụaka mana atụmatụ ha maka ọdịnihu ghasịrị mgbe Fonny jidere maka mpụ ọ na-emeghị. Ebere na 1970s Harlem, ngagharị a na-agagharị na njikọ nke di na nwunye enweghị ike igbochi ya na ihe mgbochi ha ga - emerịrị ka ha bikọ ọnụ. Ejiri mara mma, ị ga-eju anya (ma tie mkpu) na akụkọ ịhụnanya a na-emetụ n'ahụ.
N'okpuru Foto gị
39. 'Unyi Egwú' (1987)
Mgbe Frances 'Baby' Houseman (Jennifer Gray) na-etinye oge ọkọchị na Catskills na ezinụlọ ya, ọ hụrụ onye nkuzi egwu egwu nwata nwoke, Johnny Castle (Patrick Swayze) n'anya. Ọ bụ akụkọ ọdịnala na ole ịtụnanya mana anyị ga-ele ya anya ọzọ na inwego.
Narị Afọ nke 20 Fox
40. ‘Nsogbu Dị n’Aha Kpakpando Anyị’ (2014)
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịkwụsị ịkwa ákwá n'oge Ije Ije Icheta , nke a bụ ihe nkiri maka gị. Ọ na-ewebata ndị na-ekiri ndị ọrịa kansa abụọ slash enweghị ịhụnanya romantics: Hazel Grace Lancaster (Shailene Woodley) na Gus Waters (Ansel Elgort). Nke a bụ akụkọ na-agbawa obi ha.
O doro anya na mmegharị ihe nkiri a sitere na akwụkwọ akụkọ aha aha David Nicholls abụghị zuru oke (Mgbakwunye nke Anne Hathaway, ọkachasị, natara ọtụtụ ihe) mana ọ gaghị ekwe omume ịghara ịhụ Dex na Emma n'anya ka anyị na-ele ndị enyi abụọ ahụ na-ezukọ n'otu ụbọchị ahụ karịa afọ 18.
Walt Disney Studios Motion Foto
42. 'Ntuziaka' (2009)
Margaret Tate (Sandra Bullock) bu onye isi ochichi nke ulo oru na-edeputa akwukwo, Andrew Paxton (Ryan Reynolds) bu onye enyemaka nke n’enye oru ike. Mgbe Margaret chere ihu na a ga-ebuga ya Canada, ọ kpara nkata ịlụ Andrew ka o wee nwee ike ibi akwụkwọ ikike visa ya, ma nye ya nkwalite Andrew. Anyị chere na ị nwere ike ịkọ nkọ ihe ga - eme na - esote (eziokwu na ịhụnanya).
oge ntorobịa: mmalite
Akụkọ a na-akpali akpali nke mmekọrịta ịhụnanya nzuzo n'etiti ụmụ nwoke abụọ dị ike, na-agbawa obi ma bụrụ nke a rụpụtara nke ọma. Akụkọ a na-elekwasị anya na onye na-azụ anụ ụlọ aha ya bụ Joe Aguirre (Randy Quaid), onye goro Jack Twist (Jake Gyllenhaal) na Ennis Del Mar (Heath Ledger) ịrụ ọrụ na ebe a na-azụ anụ ụlọ.
44. ‘Mgbe Harry Zutere Sally’ (1989)
Meg Ryan, Nora Ephron na Big Apple - egwuregwu ndị emere na rom-com heaven. Ọ bụ ihe nkiri na-atọ ụtọ banyere otu ụzọ dị egwu nke New Yorkers (Billy Crystal gụnyere) ndị kwenyesiri ike na ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị enweghị ike ịbụ enyi-ma ọ bụ ha nwere ike?
45. ‘Wayzọ anyị si dịrị’ (1973)
Ihe ị kwesịrị ịma bụ na kpakpando Barbra Streisand na nke a megidere akụkọ ịhụnanya nke na-eme n'ime ọtụtụ afọ. Ọ dị mma, Robert Redford nwekwara kpakpando na fim ahụ, ọ bụkwa ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha na-enweghị atụ. Njedebe.
46. ​​‘Tupu ọwụwa anyanwụ / Tupu ọdịda anyanwụ / Tupu etiti abalị’ (1995/2004/2013)
Na ihe nkiri mbụ, nwoke America bụ Jesse (Ethan Hawke) na nwanyị France bụ Céline (Julie Delpy) na-ezukọ na ụgbọ oloko, na-apụ na Vienna ma nọrọ n'abalị na-agagharị n'obodo ahụ, na-ekwu okwu ma na-ahụ n'anya. Usoro nke a ga - esochi duo afọ itoolu ka e mesịrị na Paris, na nke atọ ọzọ afọ itoolu ọzọ na Gris. ’Re ga-achọ iwepụta izu ụka dum ma lelee ha niile. Tụkwasị anyị obi.
47. ‘Onye Ọrịa Na-enwe Englishngland’ (1996)
Ntughari a nke akwukwo Michael Ondaatje bu kpakpando Ralph Fiennes na Kristin Scott Thomas dika ndi enyi abuo na Northern Africa n'oge Agha IIwa nke Abụọ. O nwetara nhọpụta iri na abụọ na 69th Academy Awards na 1997 wee nweta akara itoolu tinyere Best Picture. Ọ bụrụ na ịnweghị nsogbu na njedebe, mgbe ahụ ị bụ anụ ọhịa. Naanị egwuregwu. (Ortdị.)
Foto ndị dị na TriStar
48. ‘Agbamakwụkwọ nke ezigbo enyi m’ (1997)
Julia Roberts bụ onye ọ na-abụkarị ọmarịcha mma na romance screwball a, mana ọ bụ ihe ịtụnanya nke ihe nkiri ahụ mere ka ọ baa uru ikiri. Oh, kedu ka anyi ga esi echefu banyere ah-mazing na-abụ abụ-tinyere idaha Aretha Franklin nke M na-ekwu obere ekpere.
49. ‘Dị ka Crazy’ (2011)
Youchefula ịhụnanya mbụ gị, ma ọ dị nwute maka nwa akwụkwọ kọleji dị na Britain (Felicity Jones) na nwa klas ya America (Anton Yelchin), akụkọ ịhụnanya ha na-ewere ọnọdụ dị egwu mgbe ọ mebiri usoro nke visa ya ma a manye ha ikewa. Ọ bụrụ na ihe nkiri ahụ na-eche na ọ bụ eziokwu, ọ ga-abụ na ọ bụ n'ihi na ọtụtụ n'ime ya emezighị emezi.
50. ‘Echefuru na ntụgharị’
Ndị bịara abịa abụọ (Scarlett Johansson na Bill Murray) na-etolite nkekọ na-enweghị atụ ma ha zukọta na ụlọ nkwari akụ na Tokyo. Ihu ọma, ọ bụ ihe na-akpali akpali (na mgbe ụfọdụ, na-achị ọchị-na-ada ụda na-akpa ọchị) ihe nkiri banyere ịchọta njikọ na mmadụ mgbe ị na-atụghị anya ya.
Ike gwụrụ Kate (Emilia Clarke) n'ọrụ ya na-arụ ọrụ dị ka elf gburugburu na ezumike ezumike. Mgbe o zutere nwoke na-atụghị anya ya aha ya bụ Tom (Henry Golding), na mberede ọ chọpụtara ezi ihe ọ pụtara. Alexa, kpọọ 'Ikpeazụ Christmas' na Spotify.
52.''10 Ihe m kpọrọ asị banyere gị''(1999)
Kat Stratford (Julia Stiles) na nwanne ya nwanyị nke obere, Bianca (Larisa Oleynik), enweghị ike ịdị iche na ibe ha. Ya mere, nna ha (Larry Miller) na-etolite iwu ụlọ nke kwuru na Bianca enweghị ike ịlụ ruo mgbe Kat nwere enyi nwoke. N’ezie, atụmatụ ahụ rụpụtara ihe dị iche iche.
53.'',Hụnanya, ekwe nkwa''(2020)
Nick (Damon Wayans Jr.) abụrụla ụbọchị mbụ 1,000, ọ ka alụbeghị di. Yabụ, ọ goro onye ọka iwu ịgba akwụkwọ gbasara ngwa mkpakọrịta nwoke na nwanyị, nke a na-eche na ọ nwere nnukwu ọganiihu. Dị ka e buru amụma, Nick ga-ahụta ịhụnanya mgbe ọ na-atụghị anya ya. (Ee ee, ọ na-agụkwa Rachael Leigh Cook.)
Anyanwụ Boulevard / Getty Images
Ogbe 54.''forrest gump''(1994)
N'agbanyeghị ọganihu ya ngwa ngwa, Forrest Gump (Tom Hanks) bụ nwata nwoke nwere obiọma ma nwee nchekwube, n'ihi nne ya na-akwado ya (Sally Field). O doro anya, ọ dị mwute dị ka hel. Ma na mgbakwunye n'akụkụ, ị nwere ike belata ihe mgbu site na igbe nke chọkọletị.
Onye lụrụ di na nwunye ọhụrụ (Lily James) na-eleta ebe ezinụlọ di ya dị, nke dị na ụsọ oké osimiri England. Nsogbu ahụ? O yighị ka ọ ga-echezọ nwunye di ya mbụ, bụ Rebecca, bụ onye a na-edekarị ihe nketa ya na mgbidi nke obibi.
Simon bụ nwa akwụkwọ sekọndrị dị afọ 17 nke na-agwabeghị onye ọ bụla — gụnyere ndị ezinụlọ na ndị enyi — na ya bụ nwoke nwere mmasị nwoke. Ọfọn, nke ahụ niile na-agbanwe. (Mgbe i lechara anya Hụnanya, Simon , Jide n'aka na ị ga-eleba anya na Hulu's binge -ible sequel series, Hụnanya, Victor .)
Alfonso Bresciani / CBS Ihe nkiri
57.''Ise ụkwụ iche''(2019)
Stella (Haley Lu Richardson) na Will (Cole Sprouse) bụcha ndị ọrịa cystic fibrosis. N'ihi ọrịa ha, anaghị ekwe ka ha metụ ibe ha aka, ha ga-enwerịrị ihe dị ka mita isii. Ebe ọ bụ na Stella kpebisiri ike ibi ndụ na iwu nke ya, ọ na-agbanwe iwu dọkịta ahụ na ụkwụ ise dịpụrụ adịpụ (yabụ aha ihe nkiri ahụ). Undsda awaw maara nke ọma n'oge nke coronavirus oria ojoo.
58.''M n'ihu Gị''(2016)
N'ịgbalị ime ihe iji gboo mkpa, Louisa Lou Clark (Emilia Clarke) na-agbanwe ọrụ oge niile. Ihe oru ohuru ohuru ya bu onye nlebara anya nye Will Traynor (Sam Claflin), onye ogaranya, onye oru nkpuru ego nke choro echiche ohuru banyere ndu.
59.''Anyanwụ Bụkwa Kpakpando''(2019)
Daniel (Charles Melton) na Natasha (Yara Shahidi) sitere na ụwa abụọ dị iche iche. Ọ bụ ezie na Daniel chọrọ imezu karịa ka ndị mụrụ ya zubere maka ya, Natashia na-atụ egwu na a ga-ebula ezinụlọ ya. Mgbe ha zutere aghara aghara wee nwee ịhụnanya, ọkụ na-efegharị. (Ghara ikwu, ọ dabeere na aha aha Nicola Yoon .)
Ihe osise Brendon Thorne / Getty
60.''Lovehụnanya & Ọgwụ ndị ọzọ''(2010)
Jamie Randall (Jake Gyllenhaal) bu onye ahia ogwu mara nma nke n’enweghi nsogbu ichota umu nwanyi n’oru ndi nwanyi na-agba. Mgbe ọ zutere onye ọrịa na-eto eto Parkinson aha ya bụ Maggie (Anne Hathaway), ha na-enwe mmekọrịta chiri anya ọ hụghị na ọ na-abịa.
Njikọ: 48 Movies Lady Movies n'ihi na mgbe ị chọrọ a ezigbo ochi
Studiolọ nka Amazon
61. Shụnanya ‘Sylvie’
Site na uwe mara mma ‘50s na akara egwu na Tessa Thompson na Nnamdi Asomugha nke kemịkal mara mma, ọ gaghị ekwe omume ịghara ịhụ fim a n’anya. Hụnanya Sylvie na-agbaso mmekọrịta mmekọrịta ịhụnanya n’etiti onye na-achọ ihe nkiri bụ Sylvie Parker (Thompson) na Robert Halloway (Nnamdi Asomugha), onye egwu egwu jazz.
Ọ bụrụ n ’irichachala ihe niile Michelle Obama ji echeta akwụkwọ kacha mma, mgbe ahụ ị ga-enwerịrịla etu otu akụkọ ịhụnanya ya na onyeisiala mba Amerịka Barack Obama siri bido. N'ime mmekọrịta ịhụnanya a, Parker Sawyers na Tika Sumpter na-egosipụta di na nwunye a hụrụ n'anya ka ha na-apụ n'ụbọchị mbụ ha na 1989.
63. 'vinghụnanya' (2016)
Akụkọ ihe mere eme na-akọ akụkọ ndụ Richard na Mildred Loving, ndị gbara akwụkwọ bụ ndị nyeere aka meghee ụzọ maka ọtụtụ ndị di na nwunye lụrụ di na nwunye site na ikpe ikpe ụlọ ikpe Kasị Elu Loving v. Virginia na 1967.
64. ‘Inctụnanya Jessica James’ (2017)
Mgbe ya na enyi ya nwoke gbasasịrị, Jessica James (Jessica Williams) ghasịrị mmekọrịta ọhụrụ na onye kachasị ele anya. Ọ ga-eme gị ọchị na enye gị niile na-eche.
65. ‘Mgbe niile’ (2011)
Ihe nkiri a na-emetụ n'ahụ South Korea na-esochi onye na-elekọta ebe a na-adọba ụgbọala na onye ọkpụkpọ ọkpọ mbụ nke dara maka nwa agbọghọ kpuru ìsì. Kwadebe anụ ahụ, n'ihi na ọ jupụtara na oge akwa.
nche na Amazon
RELATED: Egwuregwu 60 kachasị mma na oge niile
Categories Kichin Na-Adịgide Adịgide Ga-Ahụ Ejiji Agbamakwụkwọ
esi edozi nsogbu ntutu
na-egosi dị ka ogige ntụrụndụ na ntụrụndụ
nwa cumin ojii maka ntutu
ntutu ihu ntutu maka ụmụ agbọghọ India